Kuthetha ukuthini ukuphupha umntwana ongasekhoyo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ubomi buzele zizicwangciso ezingaqinisekiswanga kwaye ukuphupha umntwana oswelekileyo kuthetha le nto. Umjikelo uqalile, iinjongo ziyenziwa kwaye akunakuqinisekiswa, kodwa kuhlala kusisizathu esivakalayo.
Khawufane ucinge ngomntwana osandula ukuphakama, kodwa ngelishwa awe phantsi kwaye angakwazi ukuhamba ixesha elide. Nangona kunjalo, kukuwa kunye nokuphakamisa okuqinisa izihlunu zakho, into ebalulekileyo ebomini bakho.
Ukuba uphupha umntwana oswelekileyo, thatha lula kwaye uqonde ukuba ngumjikelo ovaliweyo, kodwa ngowokukhula kwawo. Kulula ke ukuqhubeka nokuphila, ukufunda nokubona icala elilungileyo layo yonke into eyenzekayo.
1 Ukuphupha umntwana ongekazalwa, kuthetha ntoni?
2 Ukuphupha usana olungekabikho ngaphambi kwexesha
3 Ukuphupha usana olungelulo olufileyo
4 Iphupha leemveku ezininzi ezifileyo
5 Ukuphupha umntwana oswelekileyo esibelekweni sakho
6 Ukuphupha umntwana oswelekileyo emhlabeni
7 Ukuphupha umntwana oswelekileyo emva koko aphile
8 Ukuphupha amawele ongekazalwa okusweleka
9 Ukuphupha umntwana ongekazalwa ofileyo
10 Nguwuphi umyalezo ophambili oziswa leli phupha?
Ukuphupha umntwana ongekazalwa, kuthetha ntoni?
Umntwana oswelekileyo, ngelishwa, akanakubanobomi kwaye uhlala usisixinzelelo kuba uchaphazela ubomi babazali. Kwelinye icala, intsingiselo yobomi, ngethamsanqa, ayinxulunyaniswa nokufa kwaye ngumjikelo kuphela.
Kuyinyani ukuba eli phupha lichaphazela iinkalo zobomi bakho, umzekelo: uthando, usapho, ubungcali kunye nezifundo. Ke ngoko, kufuneka ukuba uzimisele ukulungelelanisa nenyani entsha kwaye ufumane isifundo esihle kuyo.
Ukuphupha umntwana oswelekileyo kunentetho elula kwaye kufanelekile ukukhumbula zonke iinkcukacha. Kungekudala emva koko, iya kulunga kweyona meko ixhaphakileyo kwaye ujonge ngcono ukuba yintoni:
Ukuphupha usana olungekabikho ngaphambi kwexesha
Ixesha lifikile lokuba kungabi sinezimvo ezifanayo kwicandelo lothando, emva kwako konke iziphumo ziya kuhlala zifana.
Luthintele unxunguphalo kwaye ufune umonde, vumela ixesha lokuba "ubushushu bomzuzu" budlule. Xa imeko yoyisiwe, yonke into iyacaca kwaye unethuba lokuvavanya ukuba kufanelekile ukuqhubeka.
Zama ukuba ungoyiki ukuvala iluphu, kuba akukho sizathu sokuzama into engasebenziyo.
Ukuphupha usana olungelulo olufileyo
Inkalo yakho yobungcali ayisebenzi kwaye kufuneka uhlalutye imeko ngenye indlela. Zama ukungathethi kakhulu kwaye ubone ukuba bangaphi abantu abakukhathaleleyo, abo bangafanele ukuthwalwa nguwe.
Iphupha leemveku ezininzi ezifileyo
Ekuqaleni, iingxaki zinkulu kwaye ukuphupha umntwana oswelekileyo ngamanani amakhulu kuthetha ukuba kufuneka uzisombulule. Ke ayingomsebenzi olula kwaye ndiyazi ukuba ukhe wazama, kodwa zama enye indlela. Sombulula ingxaki nganye ngokwahlukeneyo kwaye kancinci kancinci, utyekelo kukuba ubungakanani bunciphe. Kwakhona, yazi ukuba iingxaki ezininzi zinokubonakalisa ezinye, oko kukuthi, xa zisonjululwe, kulula ukusombulula ezinye.
Ukuphupha umntwana oswelekileyo esibelekweni sakho
Intsimi yezemali ayilunganga kwaye isizathu silula: uchitha ngaphezulu kunakho. Isisombululo silula kwaye kuhlala sizama ukungazifaki kumatyala amaninzi, kuba ngale ndlela imeko yezemali inokuphuculwa.
Ukuphupha umntwana oswelekileyo emhlabeni
Imozulu yosapho ayisiyonto intle kwaye uxanduva luye kuye wonke umntu, kubandakanya nawe. Kukwabalulekile ukuba uzame ukwenza indima yakho kwaye ungalindi abanye ukuba beze kuwe.
Ngexesha kunye nokuziphatha okuhle, ithuba lokusombulula le nyani kunye nokuphucula imeko yemozulu yosapho lilungile. Ngendlela efanayo, ungaqhubeka ubonise wonke umntu ukuba ubalulekile kwaye unxibelelwano luya kuhlala lufunelwa wena.
Ukuphupha umntwana oswelekileyo emva koko aphile
Uqikelelo lubonisa ukuba iingxaki zinako ukoyiswa kwaye ziya kuba njalo, kodwa kufuneka umonde ongaphezulu. Eli gama sele licatshulwe ngaphambili, kodwa isigulana siyazi ukuba amaxesha amabi ayadlula. Nokuba ulonwabo luyadlula, kodwa ukuzola kukwenza ube nethemba lokuba yonke into izakuphucuka, kuba kukho ukholo kulo mbandela.
Ukuphupha amawele ongekazalwa okusweleka
Ekuboneni kokuqala, kukho amacala amabini kuwe: okuhle nokubi. Nangona kunjalo, ukuphupha umntwana oswelekileyo kule meko kubonisa ukungabikho kokulinganisela.
Kwangelo xesha, ungoyisa kwaye kufuneka ubaleke ugqithise. Kunqande ukuba mhle kakhulu kwaye ungaze wenze ngokuqhutywa sisiphoso, kuba ezi meko zimbini ziyingozi kakhulu kubomi bakho.
Ukuphupha umntwana ongekazalwa ofileyo
Ukuba udibana nomntu wamaphupha akho, luphawu lokuba kubalulekile ukufuna ukunxibelelana nabo. Ngaphandle koko, luphawu lokuba kuya kubakho uvavanyo olukhulu ebomini bakho kwaye iindaba ezimnandi kukuba ungoyisa.
Nguwuphi umyalezo ophambili oziswa leli phupha?
Jonga into nganye engahambi kakuhle ngenye indlela: kukufunda kunye nokuzilolonga ekuzimiseleni kwakho. Zama ukubona izinto kwicala elilungileyo kwaye uhlala usenza isifundo kuloo nto, kuba leyo yeyona nto iphambili ebomini.
Ukuphupha usana olungelolwaso kubume kakuhle kwaye kubonisa ukuba unazo zonke iimeko zokuzama kwakhona. Ubomi buzele yile mizamo kwaye ayinamsebenzi ukuba zingahambanga kangaphi, ewe, ekugqibeleni zisebenzile.